imoto obd port OBD GPS Tracker 06DX
06DX -Traffic isixhobo yoviwo womnatha lweNtsebenzo kunye umsebenzi Inkcazelo ombane Working: DC6V ~ 20V Ukusebenza ngoku: <55mA@13.7V Ubuninzi zangoku: <120mA @ 13.7V Umbla ngoku: power 5mA@12.2V lininzi: <2W Qalisa imo: injini ucinezelo ubukhulu: 62 * 49 * 27mm lobushushu Working: 20 ° C ~ 85 ° C Working ukufuma: 10% kwi-90% imodyuli GPRS parameters: 1. okane frequency: 850/900/1800/1900 MHz 2, GPRS multi-time slot : Udidi 12 3. GPRS isikhululo mobile: Class B 4. Compatibl ...
06DX - Traffic isixhobo yoviwo yenethiwekhi
Performance and umsebenzi inkcazelo
ombane Ukusebenza: DC6V ~ 20V
Ukusebenza ngoku: <55mA@13.7V
ngoku lininzi: <120mA @ 13.7V
Eceleni current: 5mA@12.2V
power lininzi: <2W
Qala Imo: injini ucinezelo
Ubukhulu: 62 * 49 * 27mm
ubushushu Ukusebenza: 20 ° C ~ 85 ° C
ukufuma Ukusebenza: 10% kwi-90%
GPRS module iparameters:
3. GPRS station mobile: Class B
4. Ihambisana kunye kwiSigaba GSM 2/2 +: Class 4 (2W @ 850 / 900MHz) Class 1 (1w @ 1800 / 1900MHz)
5. Rate: GPRS Class 10 85.6 kbps (emazantsi) 42.8 kbps (umfula)
6, inkxaso PBCCH
7, scheme ikhowudi: CS 1, 2, 3, 4
9, lo protocol mfumba: TCP / UDP / PPP / HTTP * / SMTP *
10, ngoku ukusetyenziswa: 1.3mA @ DRX = 5 1.1mA @ DRX = 9 (TBD)
11, isicelo SIM kit
12, AT ulawulo umyalelo: GSM 07,07, 07,05 kunye neminye imiyalelo ukwandiswa AT
13, inkxaso Bluetooth
Eyona engundoqo Ipharamitha woluvo umcephe:
Ukulinganisa Uluhlu lunikezelo: ± 4G
Ukuchaneka yesikali: 8.192mg
yokungqubana Support, ukukhawulezisa ngokukhawuleza, deceleration ngokukhawuleza, esweni vula ezibukhali
imodyuli GPS main iparameters:
uhlobo ethatha: GPS1612
GPS kunye QZSS L1 C / A, 1
Hardware inkxaso UGalileo E1B / C, Compass
SBA: WAAS, EGNOS, MSAS Ukuchaneka: 2D moya: GPS 10 m avareji
Siqhele: <0.02m / s
2D moya: avareji 5m kunye noncedo WAAS
Ixesha ukuchaneka: capture 1us: lokulayita <42 s
isiqalo Hot <1
Low umsebenzi ukubetha lokuqala: iimveliso Y06 bayaqonda ephantsi umsebenzi ukubetha ekuqaleni. Xa isithuthi ephakamayo, ukubetha kwentliziyo ziya kwenziwa. Y06 usebenzisa lo ukubetha ukuba ndigwebe ukuba isithuthi sele uqalile kwaye uvumbulula isixhobo. Xa ifowuni eziplagwe OBD interface isithuthi, ukuba akukho ucinezelo, uya kulala emva kokuba sele ixesha elimisiweyo ubuthongo elidlulileyo (ixesha ubuthongo Ngokungagqibekanga yimizuzu 5). Kubalulekile ukuphawula ukuba imveliso Y05D locks izikhonkwane chip amandla kunye uphawu ukubetha eliphantsi, kangangokuba nangona icebo eliphantsi ukubetha ekuqaleni zinokuphunyezwa, amandla ibhetri ayitshintshi xa isithuthi icinyiwe, kwaye cingo kungabonwa xa isithuthi ephakamayo kwixesha elilandelayo. Kunzima ukudibanisa iihambo ezahlukeneyo zibe uhambo enye, nto leyo elula ukuba uhlalutyo lweenkcukacha ezahlukeneyo uhambo.
Y06 usebenzisa ubume eliphantsi ukufikelela ngqo MCU, kwaye uvumbulula ifowuni sokuhlaba uphazamiso, kangangokuba uphawu ukubetha eliphantsi nga kuthinjwa lonke ixesha, yaye iinkcukacha ezifana umyalezo flameout, umyalezo ucinezelo, kunye noviwo ebonakalayo ziza kugqitywa emva kokuba kuthinjwe.
Ubuthongo Device: Xa isithuthi uyacima yenkonzo kwaye kunjalo nje ungaphaya ixesha ubuthongo elimisiweyo (Ngokungagqibekanga yimizuzu 5), ifowuni iza kungena ubuthongo wombuso de eliphantsi umqondiso olandelayo ukubetha is generated, kwaye isixhobo iya nebe up. Emva ukugweba ukuba isithuthi icinyiwe, oku asiyo cima ngqo, kodwa engena imo yokucima kwaye ngamaxesha ingxelo umyalezo lezempilo isixhobo.
Isixhobo packet zempilo uthumela umsebenzi : Emva kokuba isixhobo sizifihla emngxunyeni, qho kwiiyure ezingama-24 (ixesha zingasetwa, kungenziwa ukude ebekwe yi-server) ukuthumela umyalezo yempilo kwiziko ukuba axele isimo isixhobo kunye isithuthi yangoku. Umxholo womyalezo kuquka ixabiso isithuthi ibhetri ombane, GSM umqondiso, inani Hewana inxaxheba, linani leempumelelo mnqongo GSM, nokuba linani leempumelelo mnqongo GPS.
Umsebenzi navigation IP : Dibanisa i umncedisi ukuphumeza umsebenzi IP yokukhangela. Isixhobo liqhagamshelene IP yokukhangela, kwaye IP isicelo uphathiswe IP yokukhangela. Isixhobo ke ngoko ixesha sokuyivula ukuya IP isicelo ukuqhagamshelana enze intsebenziswano data. Esi IP Isicelo izicelo iiyure ezingama-24. Oku kuqinisekisa ukuba nokusasazwa yethu kukhutshwa lulawulwa ngempumelelo kwaye ukunciphisa uxinezeleko umncedisi omnye.
Umsebenzi wonxibelelwano Dual-imowudi : inkxaso-mbini imo unxibelelwano phakathi GSM kunye Bluetooth, ithanda unxibelelwano GSM, kwaye isebenzisa Bluetooth ukunxibelelana xa kukho isixhobo yeBluetooth uqhagamshelwano Y06. Oku kuya kuqinisekisa ukuba ifowuni ingasetyenziswa kule meko efanayo angekahlawulwa SIM khadi kunye neengxaki status womnatha.
Umsebenzi uphuculo Isilawuli : Ukuqhubeka umsebenzi uphuculo esemagqagaleni Y05D. Xa program kufuneka ziphuculwe okanye umsebenzisi utshintsho kwinkqubo isithuthi, i umncedisi kude ukuhambisa ehambelana ifayile bin kwaye ukude ukuthuthukisa idivayisi.
Umsebenzi yokugcina Data : Y06 uyakhula zangaphandle enkulu-umthamo falsh. Ukuba ikhefu womnatha kwenzeka, iziganeko kunye data iya kugcinwa kwi zangaphandle 1m bytes flash. Emva kokuba network ubuyiselwa kwi Internet, ulwazi olugcinwe zilayishwe kwiziko echongiweyo. Oku kuya kuqinisekisa ukuba ilahleko data akuyi kwenzeka kwimeko iimeko zenethiwekhi kakuhle.
RTC ixesha umsebenzi : Y06 une RTC (Real Time Clock) umsebenzi, nto leyo ukunika ixesha echanekileyo nokubonelela izitampu ixesha (ezifana ukuqhuba imiyalezo yokuziphatha, imiyalezo yokungqubana, njl) ukwenzela imiyalezo ezahlukeneyo. Y06 uyakwazi ukufumana iwotshi-time real ngeendlela ezahlukeneyo, kuquka GPS ixesha, uthungelwano ixesha, ukugcinwa inkqubo ngokwayo MCU wayo, njalo, kwaye ukulungiswa ukukhupha imiyalelo umncedisi.
Umsebenzi uviwo Medical : Y06 ixhasa P0, P1 umsebenzi ikhowudi ekufunyanweni kunye umsinga data ukufunda umsebenzi iimodeli ezingaphezu kwama-300. A loviwo yesitalato isithuthi lwenziwa xa ifowuni ifumana umqondiso ukubetha eliphantsi.
Remote umsebenzi uviwo lonyango: Ngoxa ukuxhasa umsebenzi ukuxilongwa ngokwasemzimbeni, Y06 kwakhona ixhasa umsebenzi uvavanyo lonyango esemagqagaleni isithuthi. Oko kukuthi, xa isithuthi kufuneka ukwenza uhlalutyo data, umyalelo ekude uvavanyo lonyango ingakhutshwa ngumncedisi, kwaye isixhobo Y06 uya kwenza ukuxilongwa ngokwasemzimbeni kwisithuthi. Ukwenzela ukuqinisekisa ukhuseleko umnini, umsebenzi ekude uviwo lonyango kufuna isithuthi ukuba simiswe wayilesa kwimeko yokupaka.
I-time real ukufunda umsebenzi ubume isithuthi: Y06 ixhasa ukufunda kude ka 103 imithombo yeenkcukacha-time. Xa arhente ngcali lifanele ukuba lenze uhlalutyo imo isithuthi, umncedisi ungakhetha umba data lifundwe ziyithumele terminal. Isithuthi yenza ukufunda data kunye lokuphumla data of 3 nemizuzu ngokuqhubekayo-10, kwaye elayisha iseva ukubonelela ngenkxaso yedata ye-arhente ingcali. Ukwenzela ukuqinisekisa ukhuseleko umnini, ukufunda umsebenzi-time yokwenene karhulumente isithuthi kufuna isithuthi ukuba simiswe wayilesa kwimeko yokupaka.
Umsebenzi nokusingathwa Isilawuli: Y06 ixhasa umsebenzi nokusingathwa qelele isithuthi. Ukwenzela ukuqinisekisa ukhuseleko umnini, umsebenzi ukususwa ekude kufuna isithuthi ezakuphumezwa i ACC karhulumente kunye takwe.
Vehicle yokufunda mileage umsebenzi ukufunda mileage zamabanga aphakamileyo: Ngokuba ezinye izithuthi, isithuthi mileage zinokufundwa ngqo, kunye Y06 iipasela ulwazi isithuthi mileage kumncedisi. Kuba nezithuthi akakwazi ukufunda ngqo mileage, ezinye izithuthi ukuxhasa umsebenzi yokufunda mileage eziziisekondari. Le fowuni ithi mileage kohambo ngalunye kwaye oluhlala kunye neenqobo zokuqala ezibekwe ukufumana mileage iyonke, obonelela uhlalutyo lweenkcukacha ezahlukeneyo. Inkxaso Data.
Fuel ukusetyenziswa ukufunda umsebenzi (kuyaqhubeka) : ukuxhasa ukufunda amafutha yesithuthi yaye inokuqokelelana ukusetyenziswa amafutha yesithuthi ngenxa kweekhilomitha ezili-100
Comment = Yakhelwe-in function endaweni GPS: Uyazixhasa azinike eyakhelwe-ngaphakathi umsebenzi GPS, kwaye uzilungisele GPS anti-jamming kunye antenna, kwaye uyaqonda ukubeka nkqi GPS eyakhelwe-ngaphakathi. I-terminal ungalayisha ulwazi endaweni kumncedisi ngokusebenzisa lokuphumla iseti ingxelo, kwaye iseva owenza imisebenzi data ezahlukeneyo ngokutsho umyalezo GPS ezilayishwe, efana track, indawo, i uthango elektroniki, nezinto ezinjengezo. I-GPS lokuphumla ingxelo zingasetwa. Okwendalo ngu 30 ukulayisha.
LwaManqaku imbuyekezo umsebenzi: Ngokuqhelekileyo, siye Ukuseta lokuphumla GPS kwixabiso elimisiweyo 30, kodwa xa edibene egopheni okanye ibhulorho, apho kuya kubakho indlela yokuwela ngqo indlela okanye ibhulorho umngxuma ekupheleni isiboniso, nto leyo eyenza amava lomsebenzisi kakhulu . Ukuze ukulungelelanisa ukuchaneka isikhokelo kunye nokuphuma data, i-GPS ingxelo lekhefu usebenzisa ixabiso lisetiwe xa uhamba kumgca othe ngqo. Xa ukuhlangana egopheni, ubuchule curve imbuyekezo lwamkelwe ukwandisa ingxinano ingxelo indawo GPS, ukuze isiphelo libonisiweyo ngakumbi Ncamathisela endleleni nokwandisa nokuxilongwa kwemizimba lomsebenzisi.
Aphantsi-alarm umsebenzi: Xa amandla isithuthi ibhetri lingaphantsi ixabiso ethile iseti, i alarm ophantsi ombane kuya kwenzeka, ebonisa ukuba ibhetri somnini esezantsi. Ixabiso lokungagqibeki ngu ngoku 11.5V. Ukusetyenziswa Imeko ye-alam ephantsi-ombane isimo ukusebenza lesixhobo ibanjiwe ixesha ngalinye umyalezo lwempilo uthunyelwa.
: Driving Uhlalutyo yokuziphatha iye eyakhelwe-ngaphakathi Imveliso sensor ukukhawulezisa, hlolo olo lunokukhangela izinto ukukhawulezisa okukhawulezayo, deceleration ngokukhawuleza, guquko elibukhali kwesithuthi. Xa isithuthi kukho ukuziphatha lokuqhuba embi ezifana kokunyuka ngequbuliso, ukuncipha ngesiquphe, vula ezibukhali, njl, ifowuni iya kuvelisa umyalezo ame ngayo. Ukuziphatha lokuqhuba eyiyo, ulwazi ixesha, nendawo ezenziwe ingxelo kwiseva ye uhlalutyo yokuziphatha lokuqhuba yomnini.
alarm yokungqubana umsebenzi lokuhluza: Xa isithuthi ivelisa ukuziphatha ukungqubana ngethuba uqhuba, umenzi woluvo umcephe eyakhelwe-ngaphakathi ivelisa ixabiso yokungqubana, ifowuni ivelisa umyalezo yokungqubana, kwaye ixabiso yokungqubana kwaye ulwazi indawo kunye nexesha le ngozi zipakishwe ulayishwe kumncedisi. Kumncedisi lokutyhala ulwazi nokusindisa kwisikhululo nkonzo alarms ingozi. Xa deceleration isixhobo engagqibekanga kune 11,76 m / s (1200 mg), kukho kugwetywa ukuba kungquzulwano sele yenzekile. Ngenxa yokuba eminye imifanekiso ibe deceleration abangaphezu kwama-11.76m / s, kodwa akunyanzelekanga ukuba kungquzulwano benene, kulula ukuba bahlasele kumnini. Imveliso Y06 wongeza yokungqubana ukuhluza logic. Xa kusenzeka ingozi yokwenene, umnini uya ngokuqinisekileyo ayeke ngomzuzu 1. Sisebenzisa GPS ulwazi inokudityaniswa neenkcukacha yokungqubana ukuhluza zingaqondwa kakuhle.
Yangaphandle serial port ukwanda: Y06 uyakhula uthotho lwangaphandle lezibuko kwaye umzila uxhulumaniso lula kunye nezinye izixhobo zangaphandle ukwandisa ifom imveliso leyo.
Search imoto remote ukufunda status: uphendlo imoto ekude kunye nomsebenzi wokufunda status iqaphelwa isixhobo ukulawula ufunde data ibhasi, khangela imoto ekude - remote control of izibane imoto kunye izithethi ukuphumeza umsebenzi search ekude, Vehicle ubume ukufunda - ihlola zemoto , iingcango, neefestile yesithuthi ngokufunda data ibhasi. Kukho ngoku Ukusetyenziswa ezintathu. Okokuqala, lo uphendlo ekude kunye nokufunda status ayaqondwa ngqo ngokusebenzisa OBD interface. Iinkqubo zenkxaso zezi Toyota, Nissan, Motors Jikelele kunye Chevrolet. I-R & D kwezithuthi Nissan kunye Jikelele-njongo sele lugqityiwe. Okwesibini, khangela imoto ekude kunye nobume befunda intuthuzelo CAN njengangoku phantsi kobhekiso phambili. Okwesithathu, khangela imoto ekude kunye nobume ukufunda ngokusebenzisa izixhobo zangaphandle, inkxaso uluhlu olupheleleyo iimoto, kodwa imfuneko ukufaka izixhobo zangaphandle, kungoku nje kwenziwa.
Umsebenzi parameter setting yobekelo kude: Y06 ungacwangcisa parameters ezahlukeneyo umbundu ifowuni ngokusebenzisa uthungelwano: ukuxhasa ukuguqulwa ekude, ukukhawulezisa ngesiquphe, deceleration ngokukhawuleza, yokungqubana, njl umbundu Iindawo aqala Inkxaso ukuguqulwa ekude ukufunyanwa lokuphumla nokulayisha Inkxaso lokuphumla ukuguqulwa ekude RTC ixesha inkxaso kude ingxelo yokuphila data i-IP kunye lezibuko inkxaso yeziko ukuguqulwa ekude yomxholo esisigxina losasazo ilizwi ukuxhasa ixesha nokulala kunye nomyalezo esempilweni ukuthumela setting lekhefu.
SMS ulawulo SIM khadi Inombolo setting: remote control, umsebenzi imoto search kude ukulawula isithuthi ngokuthumela imiyalezo ebhaliweyo. Ngaba kunokwenzeka ukuba bonke amakhadi SIM ukuthumela imiyalezo ukulawula imoto? Kakade ke, ukuba zonke Kwiiselula uyakwazi ukulawula isithuthi, ukuba akukhuselekanga ukuba umnini. Kuphela APP inombolo yefowuni abhalisiweyo ephathwayo kunye nenombolo yefowuni ephathwayo zongezwa akhawunti obhalisiweyo (ukuya amanani-5 inokongezwa) uyakwazi ukulawula isithuthi. La manani ziza kuthunyelwa kwifowuni ngokusebenzisa i-network, yaye ifowuni iza ukugcina ezi. Inombolo, kuphela ezi amanani agcinwe uyakwazi ukulawula isithuthi.
Ingxelo yesiphelo SIM inombolo yekhadi logic: Ekubeni iSIM khadi isetyenziswa ukuthumela imiyalezo ukuyilawula ukude isithuthi, ngubani na umyalezo SMS, yaye yintoni na ke SIM khadi inani le terminal? Olu hlobo luza kusebenza ngaphandle sicela onke abathengi ukufaka ikhadi leSIM ukuba unalo inani SIM card itshiswe. Ukuze bacombulule le ngxaki, yokuba i-logic ingxelo inombolo SIM card terminal, oko kukuthi, ukuba iSIM khadi inombolo terminal ezingabhaliweyo kwi iSIM khadi kwaye asikwazi ukufundwa yi-terminal, i-terminal iya kuthumela short umyalezo kweli ziko, kwaye eli ziko liya kufumana inombolo umyalezo elifutshane ngokusebenzisa kwinethiwekhi. Ikhadi ithunyelwa terminal, kwaye inombolo yekhadi kubhaliwe. Emva kokuba terminal ufumana inombolo yekhadi, inombolo yekhadi ebhaliweyo ikhadi leSIM, kwaye inombolo yekhadi ebhaliweyo isebenziseka ixesha elide. Attention: Ukuba umthengi ifaka ikhadi leSIM, kufuneka ukuthumela umsebenzi umyalezo wombhalo.
Umsebenzi Vehicle status Isilumkiso: Xa isithuthi icinyiwe, izixhobo iya ayinakubhaqa emnyango window iwonga kwaye ziveze umkhosi ngeenkalo ezahlukeneyo: Okokuqala, ukuba isithuthi exhasa uzingela ukuba umsebenzi ucango itshixiwe, ucango itshixiwe, kwaye umnyango window ukuba ivulwe. Okwesibini, ukuba isithuthi exhasa uzingela ukuba umsebenzi ucango itshixiwe, ucango lwakho, urhulumente ucango eshiyekileyo ifunyanwa cyclically de imizuzu eli-15, ucango kunye window ziyazibhaqekela, emnyango kunye window ke kulwimi lwakho, kwaye i-alam kuveliswa; yesithathu, le moto akayixhasi Xa imeko ucango wabonakala, ukubambezeleka banemizuzu engama-30. Xa umnyango window ziyazibhaqekela, emnyango kunye window ibenye, i-alam kuveliswa;
TTS sound umsebenzi ikhadi: TTS sound ikhadi ungaziphumeza usasazo fixed kunye umyalelo kusasazo kude. Kusasazo Fixed ibhekisa amazwi ukuba yokusasaza ngeenkalo ezahlukeneyo njengoko kucacisiwe kule program logic, kuquka usasazo ilizwi ezifana uphuculo, iimviwo ngokwasemzimbeni, kunye onxibelelwano status. I Sukwenza umyalelo losasazo ekude libhekisela ikhontenti eza olusasazwe ngumncedisi, kwaye terminal usasaza umxholo ngokungqinelana umxholo emva kokufumana umxholo.
Lokungcangcazela wake-up ne-alam ukubana umsebenzi: Xa ifowuni ubuthongo karhulumente, isithuthi uya kuvelisa lokungcangcazela ukuba kuvuka isixhobo. Ukuba intshukumo mkhulu kunongeno iseti, isilumkisi ukungcangcazela ziya kwenziwa. Ukuba kukho ukubana emva lunawo, isantya ukubana mkhulu 15km / H, yaye alarm ukubana usenziwa.
Previous: obd diagnostic OBD GPS Tracker OBD-Y07
Next: isinxibelelanisi obd OBD GPS Tracker OBD-Y07
Tracking Icebo iGPS Iilori
GPS Tracking Icebo Price
Zokulanda umkhondo iGPS iimoto
Management GPS Tracking Fleet
GPS Tracking For Fleet Iilori
GPS Tracking Ngokuba ukuthutha Companies
Tracking System iGPS Iilori
Management GPS Tracking Systems For Fleet
GPS Tracking Units For Iilori
Iinkonzo Tracking Truck GPS
Grimaldi Tracking Ngu Bill Of kungekwamthwalo namkhombe
Device GSM Tracking
Tracking System GSM
Hamburg Line Tracking
Hamburg Sud Track And Landzelela
Hamburg Sud kumkhumbi Tracking
Hamburg Track sihlaziye
Hapag Lloyd Tracking By yokubhukisha
Itraki bl Tracking